Breaking news ! hatattamaan lubbuu lammiilee balaa irra hanbisuuf waliif daddabarsa. – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooBreaking news ! hatattamaan lubbuu lammiilee balaa irra hanbisuuf waliif daddabarsa.
## Oduu ammaa NISSA (waajjiiraa tika mootummaa keessa nu gahee)
##hatattamaan lubbuu lammiilee balaa irra hanbisuuf waliif daddabarsa.
##Oromoon hunduu odeeffannoo kana argachuu qaba.
## Humni adda mootummaa Impaayera Itiyoophiyaa ajjeechaa sukkaaneessaa raawwachuuf leenjii xumuree guyyoota afur dura magaalaa guddittii finfinneetti akkasumaas magaalootaa adda addaa keessaati bobbasuu maddi odeeffaannoo keenyaa NISSA keessa nu akeekaan..
Humnoonni kun tarkaanfii lammiiwwaniirratti fudhachuuf tooftaa namoota kadhatanii jiraataniif bakkee bulan hin qabnee fi daandiiwwan magaalootaa irra jiraachaa jiraan fakkeessuudhaan bobbasaaniruu.
Humni adda kun guyyaa kallattii lammiileen daandii irra jirtan hundumaa sa’aa 8.00 galgalaa akka lakkoobsaa biyyaatti daandii irraa funaanuu dhaan namootaa leenjii fudhaatan saamichaa,hidhaa fi ajjeechaa sukkaneessaa, fudhataan kanaan bakka buufamu.
Daandiiwwan magaalaa finfinnee halkan sa’aa 8:00 booda humnootaa NISSA bobbaasee kanaan dhuunfatamuu.
Halkan guutuu kadhataa fakkaachuun lammiilee daraaruu f tarkanfii adda addaa fudhachuuf qophii erga eegalanii guyyootaa afur darbeera.
Jiraattoonni, miseensoonni dhaabilee siyaasaa akkasumaas hoggantooti dhaabaa moormitootaa ofeeggannoo cimaa akka taasifamuu dhaamsi maddaa odeessaa kana irraa nu gahee ni addeessaa.
Namootaa daandii jirtan fakkaachuun halkan konkoolaataa Taaksii,konkoolatootaa dhuunfaa , mana jireenya fi baakkootti namoonni baayinnaan hin jireetti isiin dubbisuuf yaalan irraa akka ofeeggatu dhaamsi darbeera.
Mootummaan impaayera Itoophiyaa siyaasaan uummataa amansiisuu dadhabuurraa jiraattoota magaalaa irraatti haaloo bahuuf murtoo fudhatee dhaa. PP filannoo bara kana gaggeeffamuu jeequumsa baakkootti adda addaatti babaldhisuu dhaan biyyiitti nageenya fi tasgabbii dhowwatani filmaataa uumamaatti abdiin eegaa jiruu dabsuuf tattaafii taasifamuu ta’uu sabaaf sablamoonni hubannoo gahaa qabachuu qabu.
Jeequmsaaf ajjeechaa mootummaan qinda’ee uummataa gooluuf keekameera uummattoonni ijaarsaa cimsuun nageenyaaf tasgabbii naannoo tikfachuun dirqamaa yeroon gaafatuudhaa.
Walumaagalatti mootummaan deeggarsaa uummaata hin qabnee abbaa irrummaatti ofi jijjiraa. Mootummaa amma jirusi abdii kutannoof uummaata biraatti fudhatamaa dhabuurraa kana ka’ee qabsaawootaa haqaaf lammiilee biyyaa sanaa akkuma sirnaa dhufaa darbaan dhiigaa dhangalaasuuf qophii xumurarra jiruu.
balaa uummatootaa qindeeffamee qolachuuf tokkummaan,ijaarsaa cimsuun, nageenyaaf ittisaa ummataa namootaa ofi keessaa muuduudhaan ofi ittisuun murteessaa dhaa.
Tooftaa namootaa harka qalleeyyii keessaatti jireenya injifachuu dadhabuu dhaan lammilee dandii irraa jiraachaa jiran fakkeessuun lammiilee ajjeesuuf karooraa kaahamee doomsuuf dammaqinsa hojeechuuf wal tiksuun dirqamaa oromoo hundaatti.
Safuu dha kaa! የአማራ ሴቶች የአማራ ወሸላ አንሶሽ ነው ወይስ ይላል? አማራው Professor #ሞጣ_ቀራንዮ
ገጣሚ ሕሊና ደሣለኝ Hilina Desalgn “የማጀት ስር ወንጌል” መንጋ እና ውሻ ተብለን ተሰደብናል ጠቅላይ ሚንስትሩም አጨብጭበዋልና ይወረዱልን ያስባለ ግ
Furmaata Waliigalaatiif Hojjechuutu Nageenya Biyyaa fi Lammiilee Mirkaneessa (Ibsa ABO – Gurraandhala 22, 2020) Ka’umsa…